Roanld Keoman Oo Sheegay In Kooxdiisa U Dagaalameyso Ku Guuleysiga Horyaalka Sanadkan.
Home Horyaalka Spain Roanld Keoman oo sheegay in kooxdiisa u dagaalameyso ku guuleysiga horyaalka sanadkan.
Barcelona ayaa laga yaabaa inay kaalinta afaraad ka gasho LaLiga, sideed dhibcoodna waxay ka dambeysaa hogaamiyaasha Atletico Madrid, laakiin Ronald Koeman ayaa sheegay inuu rajo ka qabo ku guuleysiga horyaalka Sanadkaan mana uusan isdhiibin.
Ronald Koeman kama uusan quusan in Barcelona ku guuleysto LaLiga madaama ay wajahayaan kulammo muhiim ah oo qeexi kara xilli ciyaareedkooda, laga bilaabo Elche oocgurigooda caawa kusoo dhaweynayaan.
Barça ayaa gashay kaalinta afaraad ka dib markii ay barbaro kula galeen gurigooda kooxda Cadiz dhamaadka isbuuca, waxayna eheed natiijo la yaab leh oo soo gabagabeysay 7 guul oo isku xigta oo horyaalka ah ay barcelona gaareysay.
Si kastaba ha noqotee, iyadoo hogaamiyaasha Atletico Madrid ay guuldarro ka soo gaartay Levante, taasoo la micno ah inay hal guul gaareen afartii kulan ee ugu dambeysay, Koeman wuxuu sii wadaa rajadiisa ah in kooxdiisu ay ka soo bixi karto oo ay ka qeyb gasho tartanka horyaalka.
Atletico ayaa leh seddex dhibic oo ay ka sarreyso kooxda kaalinta labaad ee Real Madrid, kuwaasoo ciyaaray kulan ka badan deriskooda, halka Barcelona ay sideed dhibcood ka hooseyso.
Inta udhaxeysa labada koox ee Clasico waa Sevilla, oo kooxda Koeman ay u safreyso isbuucaan iyagoo ku ciyaaraya horyaal. Ka dib waxay martigelinayaan isla kooxda ka soo horjeedda Talaadada soo socota lugta labaad ee semi-finalka Copa del Rey, Barça waxay u baahan tahay inay ka badiso guuldaradii 2-0 ee ka soo gaartay lugtii shirkii hore haddii ay doonayaan ineey gaaraan Finalka Copa delrey.
Koeman ayaa u sheegay warbaahinta ka hor booqashada Elche ee Camp Nou. Natiijooyinka ayaa muujinaya in koox kasta ay soo degi karto.
Waxay ku xirnaan doontaa labada kulan ee soo socda, kuwaas oo aad muhiim ugu ah in loo dagaallamo horyaal.
“Markaa, koobka, waa inaan soo laabanaa. Labada tartan, waxaan sameyn karnaa waxyaabo. Toddobaadkan, waxaan heysanaa seddex kulan oo muhiim ah.
“Way adag tahay maxaa yeelay waa inaan ka adkaano ciyaar guri oo aan la ciyaareyno Sevilla oo aan dhagaystayaal aheyn,
Barça ayaa heystay 20 isku day iyo boqolkiiba 81 lahaanshaha Cadiz laakiin waxaa lagu ciqaabay qasaarooyinkoodii markii Clement Lenglet loo xukumay inuu ku tuuray Ruben Sobrino rigoorada, taasoo u ogolaaneysa Alex Fernandez inuu u badalo barbaraha daqiiqadii 89aad ee kooxda martida aheyd. oo kaliya darbo bartilmaameed ah sameysay kulankaas
In kasta oo ay 50 gool ka dhaliyeen LaLiga ololahan – oo ay ugu badan yihiin koox kasta oo ka mid ah tartamada – Koeman wuxuu doonayaa inuu arko ciyaartoydiisa oo noqda kuwa naxariis daran dhanka weerarka.
Dhibaatadu maahan inaanan abuurin. Way ka sii xumaan doontaa haddii aanaan abuurin fursado, ”ayuu yidhi ninka reer Holland markii uu ka tarjumayay waxqabadka Axadda.
Waa inaan weydiisanaa wax ku ool ah ciyaartoyda ugu sareysa. Waxaan abuurnay fursado mana aanan dhalinin inaan ka dhigno 2-0.
“Kuwani waa daqiiqado muhiim ah, xilli ciyaareedkan, waxaan haysanaa wax qabad. Boqolkiiba goolasha ayaa ka hooseeya koox sida Barcelona ah.\_”
Koeman wuxuu xaqiijiyay in Ronald Araujo uusan weli diyaar u aheyn inuu ka soo laabto dhaawac, in kasta oo daafaca uu horumarinayo isla markaana uu kasoo muuqan karo mid ka mid ah kulamada soo socda ee ay la ciyaarayaan Sevilla.
Previous articleXidigo waa weyn oo kasoo muuqan doonaan xayeeysiinta cusub ee pepsi.
Next articleBarcelona oo ku dhawaaqday Safka ay kaga hortegeyso kooxda Elche.